Inyama Yezimbuzi: Izici Nokupheka
Goat Meat Characteristics and Cooking
Ukulima kwezimbuzi eNingizimu Afrika kugxile ekhiqizweni kwezimbuzi ngokudla (izimpongo zomdabu kanye neBoer), i-fiber (i-mohair evela e-Angora yezimbuzi), imikhiqizo yobisi kusuka ezimbuzi zobisi kanye nezinye izikhumba kanye ne-cashmere. Kulezi zimboni, imboni enkulu kakhulu yinkampani engakahleleki yokulima imbuzi. Kulo mkhakha, izimbuzi zithengiswa bukhoma futhi zihlatshwa ezindaweni zokucwasa ezingekho emthethweni ngezinhloso zenkolo nezamasiko.
Inyama yembuzi yenza okungaphezu kwama-60% kuwo wonke inyama ebomvu edliwe emhlabeni wonke. Izintandokazi zempilo yezimbuzi zithathwa izizinda zamasiko nezenkolo kanye nesimo sezenhlalakahle zomphakathi, ucwaninga yi-Alabama Cooperative Extension System ye-Alabama A & M kanye ne-Auburn University e-USA. Inyama yezinyane ithandwa ngabathengi baseSpanishi abakhetha izingane ezincane zezimbuzi eziphakeme kanye neziqhingi zaseCaribbean kanye nabantu baseSulumane abakhetha inyama ezimpilweni ezindala kanye nabesilisa abathandekayo (hhayi abafakiwe).
I-Cabrito imbuzi yezimbuzi ezivela ezimbuzi eziphethwe ubisi, ngokuvamile zibulawa ezincane - phakathi kwamasonto amane kuya kwangu-8 ubudala. Zonke izingxenye ze-cabrito ziyasetshenziswa, kufaka phakathi ama-innards noma inyama yenyama. Inyama ithenda futhi iyinambitheka kule minyaka. I-Cabrito iyinambitheka eCentral naseNingizimu Melika.
Imfuyo yezimbuzi ezivuthiwe isetshenziselwa ukudla okucutshungulwa njengama-sausages.
Izici Zokudla Okunomsoco Enyameni Yezimbuzi
Inyama yembuzi (i-chevon) ithandwa ngoba iphansi kumafutha futhi ayinayo ukunambitheka kwe-gamey ye-venison. Abantu abaningi bakhetha inyama yezimbuzi ezinyangeni ezingaphansi kwezinyanga ezingu-12 njengoba ithenda ithenda. Ngaphezu kwalokho, i-chevon isezansi kwe-cholesterol kuno-rabbit, inyamazane noma inyama yenkomo. Amafutha aphelele emzimbeni wezimbuzi angama-40% angaphansi kwaleyo yenkukhu engenasikhumba futhi engama-50 kuya ku-60% angaphansi kwamafutha kunenkabi efanayo, kodwa ane-protein efanayo. Uma kuqhathaniswa nengulube (162) yenkomo (179) yengulube (180) (175), inyama yezimbuzi inezinhlamvu ezincane kakhulu (122).
Ikhwalithi Yenyama Yembuzi Ekuhlatshweni
Ngenxa yezici ezithile zempilo yezimbuzi (izinga eliphezulu le-pH kanye ne-glycolytic engaba khona), kuyadingeka ukusebenzisa izinqubo ezithile zokuthuthukisa ikhwalithi yenyama yembuzi. Isibonelo, ukugqugquzela kagesi nokulibazisa izidumbu kungavimbela ukunciphisa okubandayo futhi kuthuthukiswe ukuguqulwa kwesisipha ukuze kudle inyama.
Uma isidumbu sezimbuzi sehlile ngokushesha kakhulu ngemva kokuhlatshwa, ukunciphisa okubandayo kwenzeke, okwenza kube nemisipha yokuthenga. Lokhu kuphuza imicu ye-muscle, okwenza inyama ibe nzima.
Ukukhathazeka komthengi ngemfucumfucu nezinyama ezinzima zempomo kungadluliswa ngokufaka lezi zenzo njengengxenye yenqubo evamile yokuxhela ezindaweni zokulahla.
Ukupheka Inyama Yembuzi
Ucwaningo lwaseMelika luye lwabonisa ukuthi imfundo yabathengi mayelana nokupheka kwenyama yembuzi kuyadingeka ukwandisa ukuthandwa kwenyama yembuzi. Ngenxa yalokho okuqukethwe okunamafutha aphansi, kunconywa ukupheka inyama yembuzi emazingeni okushisa aphansi. Ukupheka emazingeni okushisa aphezulu kungabangela ukucindezela futhi kungabangela inyama eyomile, enzima. Lokhu kubaluleke kakhulu lapho ulungiselela inyama ezimpilweni ezindala, isibonelo, izimbuzi ze-Angora.
Izindlela zokupheka zingaletha imiphumela ehlukene ngokuya ngeminyaka yembuzi kanye nohlobo lwembuzi. U-Elna van den Bergh owenza izilingo ezinkulu zokupheka ngemfuyo yezimbuzi zombili ze-Angora zezimbuzi kanye nezinbuzi ezincane zaseBoer zathola umehluko enyameni; I-Angora inyama, nakuba ivela ezilwaneni ezindala, inokudla okungcono kakhulu kokudla kwezilwane uma kuqhathaniswa neyenyama ye-Boer yembuzi.
Ukudla okuvela ezilwaneni ezindala ukupheka okude okude kancane kuveza imiphumela emihle kakhulu kunokupheka okumile okusheshayo njenge-braai (grilling). Le nyama nayo inhle ukuyisebenzisa njengenyama ehlanjululwayo njengoba izintambo ezinzima zidilizwa ngesikhathi sokugaya.
Ukuphila kwanamuhla kuyisibindi kunanini ngaphambili futhi akusiyo isikhathi sonke (kanye nekhono) lokuhamba kanye nokudla okudliwayo okunciphisa isibonelo. U-Elna uncoma ukuthi imikhiqizo yenyama yezimbuzi ezinjenge-sosaties, isoseji, umsizi omisiwe kanye nemikhiqizo yasolwandle ingakhuthaza abathengi ukuba bandise ukusetshenziswa kwemfuyo eNingizimu Afrika.